Qatargbọ elu ụgbọ elu Qatar Airways gbadara na Gothenburg Landvetter Airport
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Qatargbọ elu ụgbọ elu Qatar Airways gbadara na Gothenburg Landvetter Airport
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Qatar Airways ụgbọ elu mbụ na-adịghị akwụsị site na Doha ruo Gothenburg, Sweden rutere taa na Ọdụ ụgbọ mmiri nke Gothenburg Landvetter, na-egosipụta akara nke abụọ nke ụgbọ elu ahụ banye Sweden. Qatar Airways ụgbọ elu 177, nke onye ọkaibe Boeing B787 Dreamliner rụrụ, hapụrụ Hamad International Airport (HIA) na Doha na Wenesde na 8: 20am wee rute na Gothenburg Landvetter Airport na 1: 00 pm.
Ugbu a n'ụgbọ njem ụgbọ mmiri na-abanye na Gothenburg, Qatar Airways Onye isi oche Onye isi Ọchịchị, Mr. Simon Newton Smith.
Qatar Airways Group Chief Executive, Onye ukwu Mazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịmalite ọrụ ndị ziri ezi na obodo mara mma nke Gothenburg, isi ihe mgbakwunye ọhụrụ na netwọkụ Europe. Ọnụ ụzọ ámá Nordic a dị mkpa ga-enye njikọta dị mma maka ndị njem azụmahịa na ndị njem, ma nyere aka jikọọ ndị Sweden na netwọ ụwa anyị zuru oke nke ihe karịrị ebe 1650 n'ụwa niile. Anyị na-ele anya ịkpọta ndị ọbịa na Gothenburg, ebe ha nwere ike iji anya ha hụ ihe ụtọ obodo a mara mma ga-enye. ”
Onye isi ndị ọrụ Swedavia, Maazị Jonaas Abrahamsson kwuru, sị: “Sweden bụ akụ na ụba Scandinavia kachasị ukwuu na otu n’ime akụnụba Europe kacha ike. Zọ uzo ohuru bu ihe di nkpa, dika njikọta ahia ka odi nma maka ulo oru ndi njem nleta nke Sweden, ndi oru ahia, na inweta ulo oru ego na ihe omuma banyere mpaghara a. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị na Swedavia, ya na ndị mmekọ mpaghara anyị, enweela ike igosi Qatar Airways nnukwu ahịa ahịa na West nke Sweden, na-ebute ụzọ ọhụụ dị n'etiti Gothenburg na Doha. Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu na anyị na-anabata ụgbọ elu elu nke elu-igwe na Göteborg Landvetter Airport.
“Uzo mbu nke Qatar Airways bu ihe nchoputa nke oma n’etiti Swedavia na ndi otu mpaghara. Anyi na-egosiputa Qatar Airways nwere ahia na West Sweden. Ọ bụ ihe obi ụtọ Swedavia na ndị mmekọ anyị West Sweden jikọtara ọnụ na-anabata ụgbọ elu a kachasị elu nke Middle East gaa Göteborg Landvetter Airport. ”
Na emume ụgbọ elu ahụ, e nyere Qatar Airways onyinye "Igodo nke City nke Gothenburg", na-akwanyere nnukwu uru ọrụ ahụ ga-eweta na ụlọ ọrụ ndị West Sweden site n'inye njikọta ụba na Africa na Asia. Onyinye a nyere Qatar Airways site n'aka Maazị Henrik Einarsson, Director nke Business Establishment and Investment, Business Region Göteborg AB.
Dịka otu n'ime ndị na-ebu ụgbọ elu ụwa na-ebu ụzọ, Qatar Airways Cargo enweela ọnụnọ buru ibu na mpaghara Nordics, na-arụ ọrụ ụgbọ elu afọ na-aga ma si na Helsinki, Oslo, Copenhagen na Stockholm, tinyere ndị na-ebu ibu anọ kwa izu site na Oslo. Izu ise a na-ejide afọ na-ejide ụgbọ elu na-esi na Gothenburg ga-eme ka ọnụ ọgụgụ zuru ezu ruo 1000 tọn kwa izu site na mpaghara Nordic. Flightsgbọ elu ndị si na Gothenburg ga-erite uru dị ukwuu n'ụgbọ ala, pharma, teknụzụ dị elu na ụlọ ọrụ izugbe na Sweden, ma na-enye njikọ nke ọma na Middle East, Africa, Asia, Australia na New Zealand site na ọdụ ụgbọ elu nke ọgbara ọhụrụ na Doha.
Gothenburg, obodo nke abụọ kachasị ukwuu na Sweden, na-enye ọtụtụ ọrụ maka ndị ọbịa ịnụ ụtọ, site na iji ụgbọ mmiri na-aga n'otu n'ime ọwa mmiri nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, na ịga ileta agwaetiti Bohuslän dị nso, nnukwu agwaetiti na-egosipụta oke ọhịa pine na-eme ka fjord-dị ka ọdọ mmiri na mmiri mmiri.
Samplelele nri nri nke Gothenburg, ga Feskekörka, ahịa azụ a ma ama nke obodo ahụ, nke gosipụtara ọtụtụ oporo, oyster, mọsel, crawfish na lobster. Ma ọ bụ na-awagharị n'okporo ámá nke Haga agbata obi, ebe ị ga-ahụ ụlọ osisi ndị echekwara echekwa nke ọma, ọtụtụ ụlọ ahịa, veranda, na ọtụtụ kọfị na ụlọ oriri na ọ charụ charụ mara mma.
Ndị njem na-agagharị Sweden na Klaasị Azụmaahịa nwere ike ịtụ anya izu ike n'otu n'ime ezigbo ụlọ ndina dị jụụ, nke na-atọ ụtọ nri nri kpakpando ise na ihe ọ beụverageụ, nke a na-enye 'nri na-achọ.' Ndị njem nwekwara ike irite uru na sistemụ ụgbọ elu na-emeri nke ọma na njem ụgbọ elu, Oryx One, na-enye ihe ruru puku ntụrụndụ 4,000.
Qatar Airways na-arụ ọrụ ugbu a ụgbọ mmiri nke oge a karịa 200 ụgbọ elu site na isi ya, Hamad International Airport (HIA) karịa ebe 160 n'ụwa niile.
A na-akpọ Qatar Airways ọtụtụ 'ụgbọ elu na-emeri mmeri,' World's Best Business Class 'site na 2018 World Airline Awards, nke ndị na-ahụ maka ụgbọ njem ụgbọelu nke mba Skytrax na-achịkwa. Akpọkwara ya 'Seat Klaasị Azụmaahịa Kasị Mma,' 'Bestgbọelu kacha mma na Middle East,' na 'World's Best First Class Airline Lounge.'
Dịka akụkụ nke atụmatụ mgbasawanye ya na-aga n'ihu, Qatar Airways na-ezube ịmalite ọtụtụ ebe ọhụụ na-akpali akpali na ọnwa ndị na-abịanụ, gụnyere Mombasa, Kenya; Gothenburg, Sweden na Da Nang, Vietnam.
Doha (DOH) na Gothenburg (GOT) QR173 na-apụ 01:55 bịarutere 06:35 (Mon, Thu, Sun)
Gothenburg (GOT) na Doha (DOH) QR 174 pụọ 08:05 bịarutere 16:10 (Mon, Thu, Sun)
Doha (DOH) na Gothenburg (GOT) QR177 na-apụ 08: 20 abịarute 13:00 (Wed, Sat)
Gothenburg (GOT) na Doha (DOH) QR178 pụọ 15:10 bịarutere 23:15 (Wed, Sat)